Madooneysa Inaad Hurdo Fiican Hesho? Hadaba raac 5-taan Qaab | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan.so, December 7, 2019
Waa Muhiim inJimicsi kugu filan aad sameyso maalin kasta balse iska ilaali inaad jimicsi samyeyso afarta saacadood ee ka horreysa xilliga jiifka sabatoo ah waxa uu kicinayaa Hormoonka adrenaline. Iska ilaali hurdada maalinkii haddii aysan hurdada kugu yareyn habeenkii, Seexashada maalinkii gaar ahaan wixii ka dambeeya afarta galabnimo waxay sababbtaa iney hurdada habeenki ay kuu gooyso ama aad weyso.
Safarka hurdada waa in uu bilowdaa waqti hore ku dhawaad lix saacadood ka hor, marka sidaa darteed cabataankaaga isha ku hay, sababtoo ah xilliyadaasi dambe waa in aad iska ilaalisaa cabitaanada fudud ee ay ku jirto maadada caffeine-ka sida Shaaha, qaxwada iyo cabitaanada laga helo energy-ga. Caffiene-ka waxa uu jirka qofka ku jirayaa ugu yaraan sagaal saacadood. Inta badan dadka way ku adag tahay iney seexdaan iyagoo calooshooda maran tahay, balse caloosha oo la buuxiyo waxay sababtaa hurddo la’aan marka sidaa darteed waxaa lagaga baahan yahay inaad cunteyso afar saacadood ka hor inta aadan seexan.
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay ganacsatada guuleysatay ee dunida iney seexdaan afar saacadood balse xaqiiqda ayaa ah qofkasta ma awoodo inuu sidaasi sameyo. Jiifka saacado yar waxa uu sababaa in dhibaato ay u geysato jirka iyo maskaxda qofka bini’adamka ah. Haddii aad joogteyso inaad seexato wax ka yar shan sacaadood, waxaa aad khatar ugu jirtaa cudurada ku dhaca wadnaha iyo kansarka marka sidaa darteed waa inaad xaqiijisaa inaad seexato toddobo ilaa siddeed saacadood habeenkii, xitaa maalmahaaga fasaxa.
Tags: Madooneysa inaad hurdo fiican hesho? Hadaba raac shantan qaab
Next post Xasan Cali Khayre: Maxay Tahay Sababta Dhabta ah ee uu Xilkiisa ku Waayay?
Previous post "Waxaan dareemay in aan dhimanayo" Masaafeysiga Khasabka ah ee Sumba, Indonesia